Veroño: यो के हो, मूल, विशेषताहरु र अवधारणाहरु | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब यो लोकप्रिय संस्कृति र मौसम विज्ञान को लागी आउँछ, धेरै रोचक अवधारणाहरु जन्मेका छन्। अवधारणाहरु मध्ये एक हो कि हालैका बर्षहरुमा सिर्जना गरीएको हो भेरियो। उहाँको वचन द्वारा तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ के धेरै सजीलो मतलब छ। यो सेप्टेम्बर र अक्टोबर मा बर्ष को समय हो जहाँ तापमान आफ्नो सिजन संग मेल खाँदैन। यो भन्न सकिन्छ कि यो गर्मी र शरद को बीच मिश्रण हो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई बताउन जाँदैछौं कि veroño के हो, यसको विशेषताहरु के हुन् र जहाँ यो अवधारणा उदय हुन थाल्यो।
1 Veroño के हो
2 Veroño को मूल
3 लोकप्रिय अवधारणाहरु
4 यसले सबैभन्दा बढी कहाँ असर गर्छ?
Veroño के हो
यो एक लोकप्रिय संस्कृति मा प्रयोग गरीने शरद seasonतु को प्रारम्भिक महीनाहरु जहाँ तापमान त्यो मौसम मेल खाँदैन सन्दर्भ गर्न को लागी अवधारणा हो। Veroño पर्यावरणीय परिस्थितिहरु लाई पूरा गर्दछ जुन शरद placeतु मा हुन्छ तर तापमान संग जस्तै यो अझै गर्मी थियो। तपाइँ सडक मा धेरै मानिसहरु लाई "अलविदा गर्मी, नमस्ते veroño" वा "हामी अझै केहि समय को लागी veroño हुनेछ" को रूप मा अभिव्यक्ति भन्दै सुन्न सक्नुहुन्छ।
यो भन्न सकिन्छ कि यो शरद summerतु र गर्मी को एक मिश्रण हो र यो एक धेरै प्रयोग गरीएको शब्द हो यी दिनहरु को नाम जब यो बिहान तातो थियो र यो दिउँसो चिसो हुन थालेको छ। एउटै तपाइँ बिल्कुल शाहबलूत खान सक्नुहुन्छ दिउँसो र बेलुका शहर वर्ग छ किनकि तपाइँ बिहान र दिउँसो समुद्र तट मा एक आइसक्रीम खान सक्नुहुन्छ। यो पहिले को रूप मा ज्ञात थियो सान मिगुएल को गर्मी कि सेप्टेम्बर को अन्त्य र अक्टोबर को शुरुवात मा भयो र शरद .तु समय मा गर्मी को न्यानो तापमान लाई जनाउँछ।
Veroño को मूल
यो अवधारणा को मूल खोज्न को लागी प्रयास गर्न को लागी, हामी २०० back र ट्विटर को सामाजिक नेटवर्क मा फिर्ता जानु पर्छ। यो यहाँ छ जहाँ पहिलो महिना शुरू भयो जहाँ तापमान बिल्कुल अनुरूप थिएन बर्ष को मौसम संग हामी कहाँ थियौं। वर्षौंदेखि यो अवधारणा अधिक महत्व प्राप्त गरीरहेको छ र २०१५ मा यसको शिखर पुग्यो। तब देखि यो अवधारणा धेरै लेख र रिपोर्ट मा पेश गरीएको छ र बढ्दो लोकप्रिय संस्कृति मा प्रयोग गरीएको छ।
यो भन्न सकिन्छ कि यो बर्ष को त्यो समय जहाँ तापमान असामान्य रूप मा उच्च छ हामी के गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ भनेर परिभाषित गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो। मैले पनी पुस्तालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ जसमा हामी आफैंलाई भेट्टाउँछौं। वर्ष २००० पछि जन्मेकाहरु उनीहरु तापक्रम मा परिवर्तन को बारे मा सजग छैनन् कि जलवायु परिवर्तन को कारण हो, किनकि उनीहरु अझै धेरै जवान छन् र कुनै पुरानो रेकर्ड छैन। ती ३० बर्ष र माथिकाहरु जलवायु परिवर्तन को कारण तापमान परिवर्तन को बारे मा अधिक सजग छन्।
हामी जान्दछौं कि ग्लोबल वार्मिंगले ग्लोबल औसत तापमान बढाउँदैछ र चिसो मौसम कम चिसो हुँदै गइरहेको छ। यसले गर्मी को समय सामान्य भन्दा लामो समय सम्म बनाउँछ। जे होस्, दिउँसो को समयमा र रात को समयमा जब सूर्य तल जान्छ, यो पहिले नै पर्याप्त बलियो छ दिउँसो को आसपास न्यानो गर्न को लागी, हामी देख्न सक्छौं कि तापमान फिर्ता भयो कि कसरी उनीहरु हामी समय को लागी हुनु पर्छ।
जे होस्, यस तथ्य को बावजुद कि शब्द लोकप्रिय संस्कृति द्वारा अधिक र अधिक प्रयोग गरीरहेको छ, वास्तविक स्पेनिश एकेडेमी अझै भेटिएको छैन। यो एक आधिकारिक शब्द को रूप मा मान्यता प्राप्त छैन, त्यसैले यो मात्र एक लोकप्रिय अवधारणा हो। यो समय लाई सन्दर्भ गर्न को लागी एक धेरै सजिलो तरीका हो। तथ्य यो छ कि veroño अझै सम्म शब्दकोश मा शामिल छैन, यसको मतलब यो छैन कि यो भविष्य मा हुन सक्दैन। वास्तव मा, धेरै सर्तहरु कि सडक मा प्रयोग गरीन्छ शब्दकोश मा गएका छन्। उदाहरण को लागी, amigovio वा papichulo जस्तै केहि शब्दहरु। Amigovio त्यो व्यक्ति जससँग तपाइँ एक सम्बन्ध छ कि एक प्रेमीत्व भन्दा कम प्रतिबद्धता छ मतलब छ।
यो पनी क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ जहाँ तपाइँ बस्नुहुन्छ कि यी अवधारणाहरु लाई अधिक बार उपयोग गरीन्छ वा छैन। रोयल स्पेनिश एकेडेमी मा शामिल एक अन्य अवधारणा papichulo को हो। यो एक पुरुष को बारे मा छ, जो आफ्नो शारीरिक आकर्षण को कारण, या त पुरुष वा महिलाहरु द्वारा इच्छा को वस्तु हो।
र यो हो कि वास्तविक स्पेनिश एकेडेमी यो धेरै स्पष्ट छैन कि मापदण्ड हो कि एक शब्द को लागी सूची मा शामिल गर्न को लागी आवश्यक छ। यो लाग्छ कि मानिसहरु को एक ठूलो बहुमत एक निश्चित शब्द को नियमित रूप बाट बोल्ने र यो दर्ता। यो सोचेको जस्तो सरल छैन। शिक्षाविद्हरु को पूर्ण जान्न को लागी सहमत हुनु पर्छ कि शब्द उपयुक्त छ वा सूची मा शामिल गर्न को लागी उपयुक्त छैन। त्यहाँ केहि विवादहरु छन् जब यो पेपेरो, culamen र स्क्वाट जस्तै शब्दहरु को लागी आउँछ।
यो आश्चर्य को कुरा छैन कि समय को पारित संग veroño को अवधारणा एक आधिकारिक शब्द को रूप मा शामिल गर्न सकिन्छ।
यसले सबैभन्दा बढी कहाँ असर गर्छ?
जब यो हाम्रो जीवन मा veroño परिचय गर्न को लागी आउँछ, हामी यो पनि अधिक आवृत्ति र तीव्रता संग हुन्छ जुन ठाउँहरु मा जान्नु पर्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि आन्तरिक शहरहरु र शहरहरु बीच र रात को तापमान को एक ठूलो दायरा छ। थर्मल आयाम समुद्र को अनुपस्थिति द्वारा दिईन्छ कि तापमान विनियमित र यसको परिवर्तन चिकनी गर्न सक्नुहुन्छ। तेसैले, दिन भर मा हामी धेरै उच्च तापमान र रात मा एक अधिक स्पष्ट गिरावट देख्न सक्छौं।
अर्कोतर्फ, अधिक तटीय शहरहरुमा veroño को उपस्थिति केहि नरम छ। त्यो भन्नु पर्ने हो, दिउँसो र दिउँसो मा ती बीच तापमान मा फरक यति ध्यान दिएर छैन वर्ष को मौसम मा निर्भर गर्दछ जसमा हामी छौं। उदाहरण को लागी, जबकि एक आन्तरिक शहर मा त्यहाँ दिन र रात को बीच मा १५ डिग्री भन्दा बढी को तापमान मा अचानक परिवर्तन हुन सक्छ, एक तटीय शहर मा त्यहाँ कम छन्।
जसरी तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, लोकप्रिय संस्कृति अवधारणाहरु सिर्जना गर्दछ ती विशेष परिस्थितिहरु प्राप्त गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी एक मानिस लाई अब सम्म छैन। मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाइँ veroño के हो र यसको विशेषताहरु के हो को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » भेरोनो
हिमनदी आर्कटिक महासागर